ဖွေးဖွေး - ကိုယ်လှလား၊ မလှလားတော့မသိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားလုံးကြိုက်တယ် - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ဖွေးဖွေး - ကိုယ်လှလား၊ မလှလားတော့မသိပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားလုံးကြိုက်တယ်
Q. ဘာကြောင့်အောင်မြင်လာ တယ်ထင်လဲ
A. သင်ဆရာ၊ မြင်ဆရာ၊ ကြားဆ ရာတွေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ရယ်၊ ပရိ သတ်နဲ့အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတတ် တဲ့ ဖွေးဖွေးရဲ့စိတ်ကြောင့်လို့ထင်ပါ တယ်။ ဒါပေမဲ့ အများကြီးကြိုးစား ရဦးမှာပါ။
Q. ကိုယ့်ကိုဘာကြောင့် ပရိသတ် ကြိုက်တယ်ထင်လဲ
A. ပရိသတ်ကြီးပဲ သိပါတယ်။
Q. ရှုတင်မိတ်ကပ်လိမ်းရတာကို ကြိုက်လား
Q. တစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အခါ လုပ်တတ်တဲ့အမူအကျင့်
A. စဉ်းစားတယ်။ တစ်ခါတလေ အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တယ်။
Q. ဒိုင်ယာလော့ခ်ချပေးရင် လွယ်လွယ်နဲ့ရတတ်တဲ့သူလား
A. ဒါရိုက်တာကြီးများကိုမေးကြည့် ပေါ့။
Q. ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလှဆုံး လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အစိတ်အပိုင်း
လှလား၊ မလှဘူးလားဆိုတာ တော့မသိပါ။ အားလုံးကိုကြိုက်ပါ တယ်။
By 8Days Journal